မိုးဆက်လင်းထက် စာအုပ်များ | Weenyinthit Bookshelf
စာရေးဆရာ မိုးဆက်လင်းထက်ရဲ့ စာအုပ်လေးတွေရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတခါ scribd ကဖတ်လို့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေအတွက် google doc ကနေတင်ပေးထားပါတယ်။ Glink ပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင် google doc လင်ခ့်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ google doc ကအဆင်ပြေ မပြေ ကော့မန့်လေးချန်ထားခဲ့ကြပါအုန်း ..
မိုးဆက်လင်းထက် – အိမ်မက်ဖျော်တဲ့စက် (Glink) မိုးဆက်လင်းထက် – မနက်ဖြန် (Glink)
မိုးဆက်လင်းထက် – ဗီးနပ်(စ်)ရဲ့ တတိယတောင်ပံ (Glink)
မိုးဆက်လင်းထက် – သိုက် (Glink)
မိုးဆက်လင်းထက် – တယ်လီဖုန်း (Glink)
စာအုပ်လေးတွေဖတ်ပြီး ဘ၀အမော စိတ်အမောပြေနိုင်ကြပါစေ။
၂၀၁၀ ဖို့ Survey လေးဖြည့်ပေးကြပါအုန်း … Popularity: 9% [?]
7 Responses to “မိုးဆက်လင်းထက် စာအုပ်များ”
Hein Sone says:	December 27, 2009 at 2:29 am	Dear Ko WNT,
I’m really glad to see Ne Ko Ye’s books and i’m one of his diehard fan. I don’t know how happy I am when I see his “Sate Eai Pat thu”. I want to say “You didagreat job and thank you so much”. Unfortunately, when I opened the pdf files, I can’t read any single words except abcde and the title. Instead of showing burmese words, it show some kind of unkown sentence composed with english word. So, will you check it again or can you give me any idea what’s wrong with this file or with my computer.
Reply	တေဇာမျိုး says:	December 29, 2009 at 12:54 am	လင့်ခ်လေးက အရမ်းကောင်းပါတယ် ……. စာအုပ်တွေဝင်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ် …….. ဒါပေမယ့် ဒီစာအုပ်လေးတွေကို download လုပ်ချင်တယ်ဗျာ …… ဘယ်လိုလုပ်လို့ အဆင်ပြေနိုင်မလဲ မသိဘူးနော် ………. ကျေးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ် ……..
Reply	dccaman says:	February 5, 2010 at 5:42 am	ဆရာမောင်သော်ကရဲ့ တိုက်ရေယဉ် ၁၀၃ ၀ထ္ထုလေး ရှိရင် ဝေမျှပေးကြပါ…
Reply	moe saet says:	September 1, 2010 at 2:45 am	Google docကscribeထက်ပိုအဆင်ပြေတယ်။downloadဆွဲရတာလည်းပိုမြန်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်G-linkနဲ့ ပဲတင်ပေးပါ။လရောင်ကျူးရင့်စာအုပ်တွေလည်းတင်ပေးပါဦး။
Reply	Min Man says:	August 2, 2011 at 12:15 pm	စာအုပ်လေးတွေကကောင်းပါတယ်…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..ဒါပေမဲ့Goodgle doc နဲ့ ဖတ်ရတာ
စာလုံးတွေကတစ်ချို့ နေရာတွေမှာထပ်နေတယ်….Scribe နဲ့ တော့မဖတ်ဖူးသေးဘူး…ဖြစ်နိုင်ရင်
Link နှစ်ခုလုံးတင်ပေးရင်အားလုံးအတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်…
Reply	giant twist comfort cs says:	November 12, 2011 at 9:12 am	Good read, I just passed this ontoacolleague who was performing some research on that. And he in fact bought me lunch as I identified it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!
Reply	Phyo says:	May 31, 2012 at 5:17 am	ဒေါင်းလော့ခ်ဆွဲနည်းလေးပြောပြပေးပါဦး